‘पियोर इभी’को दुई इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्वजनिक, कुनकाे मूल्य कति ? – White Lotus Motors
Apply For Dealership About Us FAQ Blog Career Contact Us
‘पियोर इभी’को दुई इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्वजनिक, कुनकाे मूल्य कति ?
काठमाडाैं । नेपाली बजारमा भारतीय इलेक्ट्रिक कम्पनीको नयाँ ब्राण्डको स्कुटर भित्रिएको छ । ह्वाइट लोटस मोटर्स प्रालीले आइतबार ‘पियोर इभी’ नामको भारतीय कम्पनीको इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ ।
पहिलो चरणमा पियोर इभी ब्राण्डका इप्लुटो ७ जि र इट्रान्स नियो ब्राण्डको इलेक्ट्रिक स्कुटर बजारमा उपलब्ध हुने छन् । इप्लुटो ७ जिको मूल्य २ लाख ४९ हजार र इट्रान्स नियोको मूल्य २ लाख २९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
दुबै इलेक्ट्रिक स्कुटरमा २२ सय वाटको मोटर र सजिलै एक ठाँउबाट अर्को ठाउँमा लगेर रिचार्ज गर्न सकिने ६० भोल्ड ४० ए एच लिथियम आयन ब्याट्री छ । जुन ४ घण्टामा रिचार्ज हुने बताइएको छ । यो एक पटक चार्ज गरेपछि ६० किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले १ सय १६ किलोमिटरसम्म गुडने मोटर्सको दावी छ ।
मोटर्सका प्रवन्ध निर्देशक अशोक खड्कीले हाल उक्त ब्राण्डका इलेक्ट्रिक स्कुटर खरिद गर्दा ग्राहकले नगद छुट पाउने बताए । उनले हालका लागि पियोर इभीको ब्राण्डको स्कुटर खरिद गर्दा नगद २५ हजारका साथै एसेसरिजमा १० हजार रुपैयाँ छुट प्रदान गरिने बताए ।
मोटर्सका प्रवन्ध निर्देशक अशोक खड्कीले कम्पनीले यसको ब्याट्री मोटर र कन्ट्रोलरमा ३ वर्षको वारेन्टी प्रदान गरेको पनि बताए । यसमा एलसिडी स्क्रिन, अलोए ह्विल, एन्टी थिफ प्रोभिजन विथ स्मार्टलक, रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ लगायतका फिचर्स छन् ।
White Lotus Group Nepal is one of the leading and growing business companies in Nepal. We prefer to portray us... Learn More
Copyright © White Lotus Motors Pvt. Ltd.